Is Maamulkii Canfarta oo Maamulkii Soomaali-State kaga Horeeyey Probagaantaha war baahinta.(Sawrro) – Xeernews24
Is Maamulkii Canfarta oo Maamulkii Soomaali-State kaga Horeeyey Probagaantaha war baahinta.(Sawrro)
13. Januar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Sawiradan muuqda Waa Bannaan baxyo maanta laga sameeyay deegaanadda Canfarta ee dalka Itoobiya iyago ku dhawaaqayo (Ciise & Ogaden & Onlf ayeyba Sooomaali ka yaqaanin ) Soomaali-Ciisay dhulka noo da sidda ay hadalka u dhigayaan .
Rabshadahan ayaa ku soo beegan xili ay wasiiradda Difaaca ee Ethiopia Jabuuti socdaal ku gaadhay .Warar baa sheegaya In uu Federaalka Itoobiya ku yidhi Ismaciil Cumar faragalinta nagada taas oo ah been sal iyo raad toona lahayn .
Shacab uu Ciidanka Liyuuga Canfarta leynaayo ina lagu tilmaamo Jabhad dabateena la dhaho ina Cumar Geulle ayaa Fangareeya Soomaalida waa mid qiil u raadis ah si shacabka loo sii Gumaado .
Dowladda Federalaka ayaa u eeg mid dhulkan Hodanka ah ee Canfarta la hoos geeyay iney Dhayaal ku qaadato una hiiliso kililka Canfarta si loo sii Gumeysto Ummadda Soomaaliyeed taas oo aan dhacayn.
Dowladda Federalaka Itoobiya ayey Fartu ku Godantahay iney waxan ka dambeyso nololna la rabin Soomaali-Galbeed bishuba horteena wey imaan Haddu rabi idmo .
Sidey wax ujiraan in kastoy la saadaalin karin balse Dowladdeena Soomaaliyeed ayaa ila muuqata mid shaqadeedi Gaabisay oo afti iyo been baraha bulshada lala dhex wareego si shacabka loo aamusiiyo oo loo maran habaabiyo.
Adeen Faarx & Mustafe Cagjar , Shacabkan waa Soomaali waana ogtihiin sidey wax u jiraan inaad ka aamustaan xasuuqan socda wa mid laga calool xumaado. Wixii idin dhex mara Federaal amase xog kaste inaad shacabkiina la wadagtaan waaye si dabinada lasoo maleegi lagaga hortago .
Shacabka Gobolka Sitti iyo Deegaanka ba waxan idin ka codsaneyna inaad bannaanbaxyo sameysaan iskuna garab tagtaan Ummadda Soomaaliyeed ee la xasuuqayo .
Cundhufo, Cadeyti, iyo Garba-ciise,
Midnimadiina Adkeysta markaad mideysantihiin Cid wax idin ka qaadi karta majiro .Kana Foojignaada Shirqoolada ay idin la maagan yihiin .Ogaadana Iney qori afki aynan waxba ku qaadin ragaas xitta Federaal dagaalna Soomaali baan U nahay .
jid goo,yadaan ay maanta Canfartu bilaabeen waxay ahayd kaalinti Soomaalidda seegtay Itoobiya oo jidka laga xanibay saacado yar waxay uga dhigan tahay qof cunaha iyo hawaddaba laga xidhay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/soo-dhacay.png 167 302 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-13 11:22:332019-01-13 11:23:23Is Maamulkii Canfarta oo Maamulkii Soomaali-State kaga Horeeyey Probagaantaha war baahinta.(Sawrro)
Daawo Itoobiya oo degi la,iyo Axmaarada Oo Dagaalka Ku soo Biirtay. Xiisadii Soomalida Dhuunyar & Canfarta U dhaxay oo meela fog cagaha la...